सुस्मिता चोकमा आमा पुग्दा यस्तो, टोलवासीको भिड लाग्यो, बिचरा! सम्हालिन सकिनन् आमा (भिडियो) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सुस्मिता चोकमा आमा पुग्दा यस्तो, टोलवासीको भिड लाग्यो, बिचरा! सम्हालिन सकिनन् आमा (भिडियो)
काठमाडौ । पुरै परिवार मिलेर ह, त्या गरिएकी हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४, कर्राकी सुस्मिता थापा घटना निकै चर्चित घटना हो । विवाह भएको ६ महिनामै दुर्घटनामा सुस्मिताको श्रीमानको निधन भएको थियो । श्रीमानको निधन पछि इन्सुरेन्सको करिब एक करोड रुपैया सुस्मिताले पाउनुपर्ने देखिएपछि घरका सबै सदस्य मिलेर घटना गराएका थिए ।
विवाह गरेर पठाएकी छोरी एक वर्ष नहुँदै गुमाउनु परेपछि सुस्मिताको आमा बुवाले त्यो पी डा सहन सकेका छैनन् ।
विवाह भएको ६ महिनामै छोरी विधवा भएकी थिइन् त्यसको ६ महिना पछि नै छोरी पनि गुमाउनु परेको थियो । सुस्मिता आफ्नै घरको भान्सा कोठामा असार २ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । सुस्मिताको माइती पक्षले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले सुस्मिताका परिवारका ४ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
सुस्मिताको असार २ गते ह’ ‘त्या भएको थियो। उनीहरूले छिमेकीलाई देहत्याग गरेको बताए पनि अनुसन्धानबाट ह’ ‘त्या गरेको देखिएपछि प्रहरीले चारै जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
रूपेन्द्रका नामबाट सुस्मितालाई आउने सबै रकम आफूलाई दिन परिवारले बारम्बार उनलाई द’बाब दिने गरेका थिए। हेटौडा स्थित सुस्मिता चोकमा पुग्दा उनको आमाले अहिले आफुलाई सम्हाल्न सकिनन् ।
विपनाका बाबुआमा आफू बिरुद्ध मिडियामा आएपछि रिसाए विनयजंग, युट्युवरलाई ध’म्की दिँदै विपनाको बारेमा यस्तोसम्म भन्न भ्याए (भिडियो हेर्नुहोस्)